विश्लेषणात्मक + रचनात्मक = सामाजिक मीडिया सफलता Martech Zone
विश्लेषणात्मक + रचनात्मक = सामाजिक मीडिया सफलता
सोमबार, अप्रिल 20, 2009 आइतबार, अगस्त 23, 2009 Douglas Karr
सामाजिक मिडियामा सफलता पुर्‍याउने विशेषताहरू के के हुन्? जब हामी काममा बढ्दै जान्छौं, हामी प्रतिभा खोज्दै छौं र सही मिक्सको आवश्यकता छ।
मेरो छोरा एक गणित विद्यार्थी हो ... र एक संगीतकार। मेरो छोरी एक गायक हो ... र एक गणित wiz। म धेरै विश्लेषणात्मक हुँ ... तर मेरो लेखन र डिजाइनमा रचनात्मक हुन मनपर्दछ। संगीत पक्कै मेरो छोरा र छोरी दुबैको लागि सफलताको कुञ्जी हो। म संगीतकार होइन, तर रचनात्मक शौकहरूमा म काम गर्दछु मेरो सफलतामा। मलाई विश्वास छ कि तपाइँको काम बाहिर रचनात्मकता अभ्यास तपाइँको काम मा विश्लेषण र समस्या समाधान जब मद्दत गर्दछ - एक अन्ततः तपाइँको सफलता को लागी नेतृत्व गर्दछ।
म आफैंलाई सोच्दिन विशेषज्ञ सामाजिक मिडियामा तर मसँग खानीको माध्यमबाट कम्पनीहरूलाई गाइड गर्न र मद्दत गर्न पर्याप्त अनुभव भएको छु माध्यमिक लाभ उठाउन। लगभग हरेक दिन म ब्लग पोष्ट, प्रस्तुतीकरण, भाषण, ईमेल डिजाइन र वेब डिजाइन मा काम गर्दैछु। यी प्रत्येक मेरो लागि रचनात्मक आउटलेट हुन्।
यदि मैले मेरो समयको चार्ट बनाउने हो भने, यो ~ 50% रचनात्मक र ~ 50% रणनीतिक / विश्लेषणात्मक हो। म निश्चित हुन सक्दिन कि म जस्तो हुन सक्छु रचनात्मक समाधानहरूमा म ग्राहकहरू र सह-कामदारहरूसँग काम गर्दछु यदि मसँग दैनिक रूपमा अभ्यास गर्न आवश्यक हुने केही आउटलेट छैन भने। म कृतज्ञ छु कि मलाई रचनात्मक समाधानको साथ आउन लगातार चुनौती दिइयो - यो एक प्रयोगकर्ता इन्टरफेस डिजाइन हो वा शब्द एक मनोरञ्जनात्मक ब्लग पोष्टको लागि।
मैले सफल व्यवसायमा रहेका मेरा धेरै साथीहरूलाई हेर्दा उनीहरूसँग समान रचनात्मकताहरू छन्। तिनीहरू मध्ये धेरैले दुबै विकास र ग्राफिकल डिजाइन गर्छन्। केहि संगीतकारहरू हुन् र अरू फोटोग्राफरहरू हुन्। धेरै केहि एथलीटहरू हुन् ... तर साधारण खेलाडीहरू होइनन्, तिनीहरू सेता पानीका राफ्टर्सहरू, साहसी रेसरहरू वा म्याराथन धावकहरू हुन्। म रचनात्मकताको कल्पना गर्न सक्दिन कि यसले तपाईंको शरीरलाई ती चुनौतिहरूको बीचमा धक्का दिन सक्षम पार्छ।
मेरा साथीहरूले उनीहरूको बाहिरबाट के गर्छन् भन्ने सुन्न म सँधै छक्क पर्छु काम। धेरै व्यक्तिहरू मेरो कामको रचनात्मक पक्ष र विश्लेषणात्मक बीच भिन्नता गर्दैनन्, तर यो पक्कै पनि त्यस्तो कुरा हो जुन म ट्याप गर्न सक्षम छु। मलाई थाहा छ जब मँ अन्य प्रकारको सोचलाई मद्दत गर्न प्रत्येक प्रकारको सोचाइबाट समाधानहरू प्रयोग गर्दैछु र मैले यो प्राय: गर्नु पर्छ। यो स्थिर अभ्यास र राम्रो ट्यूनिंग लिन्छ।
समय को% 99%, मेरो अनुभव मा, रचनात्मकताको बारे मा कडा हिस्सा केहि आउँदै छ कहिल्यै कसैले सोचेको कहिल्यै छैन। कडा भाग वास्तव मा कुरा सोच्नुभएको कुरा कार्यान्वयन गर्दै छ। सेन्ट गडिन
मलाई यो पोस्टको पाठकहरूको मनपर्दछ उनीहरूको रचनात्मक पक्ष बाँड्न र कि त ब्लग गर्नुहोस् वा टिप्पणी गर्नुहोस् कि यसले कसरी उनीहरूको कामको जिम्मेवारीहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमतालाई सफलतापूर्वक प्रभाव पार्छ। कृपया साझेदारी गर्नुहोस्!
इयान आयरेसद्वारा सुपर क्रन्चरहरू
विशाल लाभहरू ... अब रहस्यहरू प्रकट भयो!
अप्रिल 20, 2009 मा 11: 58 PM
जब मैले आफ्नो क्यारियर सुरु गरेको थिएँ, म मेरो दिन लेख्न र कला निर्देशित प्रत्यक्ष मेल प्रयासहरू खर्च गर्ने थिए। धेरै दाहिने दिमाग त्यसोभए रातमा, म मेरा गैर-नाफा ग्राहकहरूको मेल परिणामहरू ट्र्याक गर्न डाटाबेस प्रोग्राम लेख्छु जो त्यस समयमा अनुकूलित कोष जुटाउने प्याकेजहरू खर्च गर्न सक्दैनन्। धेरै बायाँ दिमाग।
पछि, जब म प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाको कम रचनात्मक पक्षमा कम संलग्न भएँ, मेरी श्रीमती र मैले सँगै एउटा साप्ताहिक पत्रिकाको लागि एक-प्यानल कार्टुन लेख्यौं (शिकागोको मिलवाकी संस्करण "मिलवाउकी साप्ताहिक" नामक पाठक)। मैले यसको लागि सबै कार्टुनिing गरें।
यो दुबै प्रकारका गतिविधिहरूलाई मिल्काउन म प्रायः प्रयास गर्छु भनेर हेर्नको लागि रोचक भएको छ। यो एक कारण यो हो कि मैले जीवनको लागि के गरे पनि मैले यसको लागि भुक्तान गरेन भने।
यस चाखलाग्दो विषय ल्याउनका लागि धन्यबाद (मलाई कम्तिमा पनि मलाई!)। म अरु रचनात्मक र एनालिटिकल इल्चहरू स्क्र्याच गर्न अरूले गर्ने कार्यको लागि उत्सुक छु!
अप्रिल 21, 2009 मा 10: 40 एएम
"मैले बाँच्नको लागि के गरेको थिएँ मैले भुक्तानी गरे पनि छैन।" - यसले सबै भन्छ, जेफ! मलाई लाग्छ म त्यस्तै स्थितिमा छु… यद्यपि मैले बिलहरू तिर्न केहि गर्न पर्छ। 🙂
अप्रिल 21, 2009 मा 8: 35 एएम
म दिन मा ग्राफिक डिजाइनर हुँ, तर जनवरी-अप्रिल को महीनाहरुमा, म दोस्रो कर लिन्छु ट्याक्स गरेर। किनकी दुई एकदम भिन्न छन्, म दिमाग थकित छैन म एक दोस्रो पार्ट टाईम काम मेरो दिन काम जस्तै केहि बढी गरीरहेको रूपमा।
जब म केहि डिजाईन गर्दैछु, मेरो मस्तिष्कको दुबै पक्ष प्रयोग गरेर म दुबै व्यावहारिक र रचनात्मक हुन मद्दत गर्दछ। यसले मलाई अफिसमा पनि अनमोल बनाएको छ, म सुझावहरू दिन सक्षम छु जुन हाम्रो व्यवसायसँग मद्दत गर्न सक्दछ, तर हामीलाई सामान्य बनाउन केही साधारण भन्दा बाहिर छन्।
अप्रिल 21, 2009 मा 10: 39 एएम
त्यो वास्तवमै रमाईलो छ - पक्कै पनि हाम्रो ट्याक्स कोडको साथ यसले क्रिएटिभिटीको केही हदसम्म लिनुपर्दछ (तर धेरै नै होइन!)।
अप्रिल 22, 2009 मा 9: 55 PM
म टेक्नोलोजीसँग काम गर्छु, तर म स a्गीतकार पनि हुँ। मेरो विचारमा मेरो संगीतको उर्जा सक्रिय गर्न म मेरो फोकस खाली गर्न मद्दत गर्दछ र मलाई अधिक कुशलतापूर्वक काम गर्न सक्षम गर्दछ।